Banyere anyị - Shijiazhuang Osprey Tools Co., Ltd
Sintered Diamond Hụrụ pupụtara
Laser welded Diamond Hụrụ pupụtara
Diamond-egweri & polishing Tools
Diamond-egweri efere (Brazed)
Diamond-egweri Shoes (Brazed)
Shijiazhuang Osprey Tools Co., Ltd dị na ngwá n'ichepụta isi ke Shijiazhuang. Ebe ọ bụ na tọrọ ntọala ke 2003, Osprey Tools e-ege ya mmepe na imewe nke diamond ngwaọrụ. The ngwaahịa nso ekpuchi diamond okirikiri ikwo pupụtara, egweri wiil, egweri akpụkpọ ụkwụ, polishing pad, isi malite ịgba ibe n'ibe wdg Osprey Tools nwere a ahịa network ekpuchi 30 anāchi achi na China, na-ebupụ ka North America, Europe, Oceania na ndị ọzọ na mpaghara. E wezụga ya onwe ika, Osprey Tools akwado ọtụtụ ahịa na OEM ma ọ bụ OEM azụmahịa. Mgbe afọ ngwa ngwa mmepe, Osprey Tools bụ onye na ndị na-eduga Chinese Nsukka nke diamond ngwá ọrụ, na ọ na ndibọhọ a aha ọma na elu àgwà ngwaahịa na iwu siri ike àgwà akara.
Osprey Tools-ekpuchi ebe ndị 20,000 square mita, na ọkachamara R & D, QC, Production, na Sales otu etc, ngụkọta ọrụ n'elu 150. The ogbako nwere pụrụ ịdabere na akpaka ma ọ bụ semiautomatic mmepụta na ule ụlọ ọrụ, gụnyere sintering akara, brazing akara, laser ịgbado ọkụ akara , ekweghị ekwe analyzer, njupụta analyzer, itule tester, ule ubi wdg
Kwa afọ Osprey Tools invests 10% of ya kwa afọ revenue na R & D. The R & D otu nwere ihe nkezi ahụmahụ nke karịrị 10 afọ, ma ọ bụ ike na-eme ngwa na-ahaziri arịrịọ. The R & D injinia maara dị iche iche ngwa ọnọdụ nke diamond ngwaọrụ, nke enyere ha aka na-enye ndị ahịa na ọkachamara oru nduzi, imewe ndụmọdụ na ọrụ ọzụzụ.
The ụlọ ọrụ nwere ihe magburu onwe àgwà akara usoro, gụnyere IQC, IPQC, FQC, mgbe-ire ọrụ etc, n'ịhụ na niile ahịa enweta naanị elu àgwà ngwaahịa. Na na nlezianya akwụkwọ akara, na confidentiality nke teknuzu akwụkwọ na ahịa ozi na-ekwe nkwa.
Osprey Ngwaọrụ, gị pụrụ ịdabere na soplaya nke diamond ngwaọrụ. Mmadụ Bịa ka anyị factory, na-atụ anya ka imekọ ihe ọnụ na gị!